Dawladda oo Daneenaysa ka Hortagga ku Daneeysiga galmada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
ISawirle: Henrik Montgomery/Scanpix
Dawladda oo Daneenaysa ka Hortagga ku Daneeysiga galmada
La daabacay torsdag 7 juni 2012 kl 17.37
Dawladda ayaa maanta oo khamiis ah u xil-saartay hayadda maamulka dhallin-yarada howl qaas ah ee la xiriirta soo ban-dhigidda war-bixinno looga hor-tageyo ku daneeysiga galmo ee lagula kaco wiilasha iyo hablaha ee dhanka aaladda internetka iyo aaladaha is-gaarsiinta, sida uu sheegay war ka soo baxay wasaaradda tacliintu.
War-bixintan ayaa loo baahan yahay ine dhallaanka wiilasha iyo habluhu iska dhex arki karaan dhibaatooyinka lagula kici karo dhanka galmada ee aaladda internetka. Sidoo kale inay war-bixinta ku caddahay halka ey dhallaanku taageero ka raadsan karaan, sida ey isaga caabin karaan dhanka aaladda interneka kolka tacadi noocaasiya la isku dayo in lagula kaco iyo wixii la mid ah.
Si gaar ah waa in baaritaankani uu isha ugu ifiyo xaaladda hablaha iyo haweenka da'da yar, kuwa u janjeera galmada isku jinsiga ah ee loo yaqaanno hbt iyo kuwa aan dhammeeyn. Howsha loo xil-saaray hayadda maamulka dhallin-yarada ayaa sidoo kale ku saleeysan war-bixinno ku wajahan waalidiinta iyo cid walba ee dhallaanka la shqeeysa.
Waalidku wax ma ka qaban karaan dhibaatada dhallaanka loogu geeysto aaladda internetka?
In laga mamnuuco internetka
In lagu ilaaliyo internetka
Waayo-aragnimo uma lihi